အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးကို တစ်နှစ်နီးပါး နေ့စဉ် အဓ္ဓမမှု ကျူးလွန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » World News » အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးကို တစ်နှစ်နီးပါး နေ့စဉ် အဓ္ဓမမှု ကျူးလွန်
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးကို တစ်နှစ်နီးပါး နေ့စဉ် အဓ္ဓမမှု ကျူးလွန်
Posted by smytu1996 on Sep 26, 2010 in World News |7comments
စိတ်မနှံ့သော ဖခင်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူကကို တစ်နှစ်နီးပါး နေ့စဉ် အဓ္ဓမမှု ကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့် ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံ မနီလာ တစ်ရားရုံးက နှစ်ပေါင်း ၁၄၄၀၀ အထိ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်သည်။ အဆိုပါ ဖခင်ဖြစ်သူမှ ဆိုဒ်ကားမောင်းသည့် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး လူမဆန်သော ပြစ်မှုကို သူ၏ ဇနီး ဟောင်ကောင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်နေစဉ် တစ်နှစ်အတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရားရုံးက မဒိန်းကျင့်သည့် အကြိမ် တစ်ကြိမ်လျင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်းပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က အသက် ၁၃ နှစ်ရှိပြီး ယခုအခါ အသက်၂၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သော သူမ၏ အခက်အခဲဆုံး ခုနှစ်မှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ကာလက ဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်တွင် အိမ်ဖေါ်အဖြစ် သွားရောက် လုပ်ကိုင် နေသော မိခင်ဖြစ်သူက သူမ၏ သားသမီး သုံးယောက်ကို ဖခင်နှင့်အတူ မနီလာမြို့တောင်ပိုင်း Los Banous တွင် စိတ်ချ လက်ချ ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရားလိုဖြစ်သူက ပြောကြား ခဲ့ရာတွင် သူမကို ဖခင်ဖြစ်သူက နေ့စဉ်နီးပါးမျှ မတရား ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းနှင့် သူမ၏ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ဆွေမျိုးများ အားလပ်ရက် ခရီးထွက်သည့် အချိန်ကျမှသာ အခက်ခဲဆုံး ကာလများ အဆုံးသတ် ခဲ့ရကြောင်း နှင့် အားလပ်ရက် ခရီးစဉ် အပြီးတွင်မှ မိခင်ဖြစ်သူကို သူမ ကြုံတွေ့နေရသမျှ ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင် ကို ဖွင့်ဟ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဖြစ်အပျက်များကို မိခင်ဖြစ်သူက သိသိခြင်း အိမ်ပြန်လာပြီးနော် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး အမှုဖွင့် တိုင်ကြား စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားရုံးတွင် ဖခင်ဖြစ်သူက ခုခံပြောဆိုရာတွင် သူ၏ မိန်းမသည် သက်သက် စွပ်စွဲခြင်းသာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်များ၏ ယုံကြည်မှုကို ရယူလိုခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်လိုသော ဆန္ဒရှိခြင်းကြောင်း ဇာတ်ကွက်ဆင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
စိတ်မနှံ့ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို တရားရုံးမှာ ဘယ်လို သက်သေပြလဲ
တကယ်စိတ်မနှံ့တဲ့ ဖခင်နဲ့ ကလေး ၃ ယောက်ကို မအေတယောက်က
တစ်နှစ်လုံးလဲ (ဆွေမျိုးတွေရှိရဲ့သားနဲ့)ဘယ်သူ့မှမပြောဘဲနေ နေတယ်လား
မကြားဝံ့ မနာသာ ပါလား။
နှစ်ပေါင်း ၁၄၄၀၀ တောင် အများကြီးပေါ့. . . ကြောက်စရာကြီးနော် . .. စိတ်မနှံ့တဲ့သူက အပြစ်မရှိဘူးဆို . . .
ချဉ်သီးနဲ့ဆား အတူမထား၇ဖူးတဲ့ စကားပုံ ၇ှိတယ်လေ။ သမီး အ၇င်းမဟုတ်လို့ထင်တယ်။
နှစ်အများကြီးထောင်ချလဲအလကားပါ သူကအဲဒီလောက်နှစ်အထိအသက်ရှည်မှာမှ မဟုတ်တာ။
ကိုပေါက်ရေ ကြားဘူးတာတော့ တခု ရှိတယ် နှစ်တွေ အများကြီး ထောင်ချရင် မင်းမိန့် နဲ့မို့ သေလည်း သူရဲ့ ၀ိညာဉ် မလွတ်ဘဲ အကျဉ်း ဆက်လက် ကျခံရတယ်လို့ ကြားမိပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ အချုပ်ခံနေရတဲ့ နှစ်မစေ့သေးတဲ့ သရဲတွေ လည်းရှိတယ်လို့ ကြားမိတယ် အဲဒါတော့ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာတော့ ထောင်မှူးတွေက သိမှာပေါ့နော်…